Jowhar.com : Somali Leader News - News: Xukuumada Soomaaliya oo gar gaarkii u horeysay gaarsiisay degmada Qoryooley
April 19 2014 03:00:21
Xukuumada Soomaaliya oo gar gaarkii u horeysay gaarsiisay degmada Qoryooley
Xukuumada Soomaaliya ayaa maanta gaarsiisay deeqdii u horeysay oo raashin gar gaar ah, kaasoo qeyb ka ah howlo loogu gurmanayo dadka ku dhaqan deegaanadii lagala wareegay Al-Shabaab.
Ilaa sagaal gaari xamuul ah oo raashin ah oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa gelinkii hore ee maanta gaaray degmada Qoryooley, waxaana galbinayay gaadiid dagaal oo ay la socdeen ciidamada dowladda.
Mas'uuliyiin ka tirsan Wasaarada Arrimaha gudaha iyo saraakiisha ciidamada qalabka iyo Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa kulan ka yeeshay qaabkii kaalmadaas loogu qeybin lahaa dadka ku dhaqan degmada.
Raashinkan gar gaar ayaa la filayaa in maalmaha soo socda loogu qeybin lahaa dadka deegaanka, waxaana laga arinsaday in dadkii ka barakacay degmadaas dib loogu soo celiyo, maadaama ciidamada ay xaqiijiyeen ammaanka degmada Qoryooley.
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa isla gartay in gar gaar raashin la gaarsiiyo deegaanada laga saaray Al-Shabaab, halkaasoo xaalado bani'aadanimo laga soo sheegayay.
mahad on April 04 2014
Jowhar.com659,708 unique visits